Git Sangit News » गर्भवती महिलालाई यौ’न स’म्पर्क गर्दा बच्चालाई असर गर्छ कि गर्दैन जानिराखौ?
गर्भवती महिलालाई यौ’न स’म्पर्क गर्दा बच्चालाई असर गर्छ कि गर्दैन जानिराखौ?
लगातार यौ’न सम्पर्क गरीरहँदा जब महिना’वारी बन्द हुन्छ र त्यसपछि १०/१५ दिन पछाडि चेकअप गराउँदा ग’र्भ रहेको जानकारी पाइन्छ ।लगातार यौ’नस’म्पर्क गर्दा गर्भ’पतन हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले यि दुईकुरा नै प्राकृतिक भएकाले ग’र्भ अवस्थामा यौ’नस’म्पर्क गर्दा असर गर्ने, नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन ।
गर्भा’वस्थामा यौ’नस’म्पर्क गर्दा के बुझ्नु पर्यो भने ग’र्भवती महिलालाई अप्ठ्यारो, असहजीलो हुनु भएन । त्यसैले जुन आसनमा यौ’न सम्पर्क गर्दा महिलालाई सहज हुन्छ त्यहि आसनमा यौ’नस’म्पर्क गर्नुभयो भने महिला, बच्चा कसैलाई पनि असर हुँदैन ।
ग’र्भावस्थामा महिलाको मनमा प्रेमका भावहरु बढि आउने हुँनाले त्यो कुरालाई यौ’न जोडिले ख्याल राख्नु गरुरी हुन्छ । ब्लिडि’ङ हुने कारण भनेको ग’र्भरहेको बेलामा कुनै पनि बेलामा हुने कुरा हो ।
यो गर्भा’वस्थाको सबैभन्दा जोखिम पुर्ण अवस्था हो । यदि पटक पटक ब्लि’डिङ हुने, गर्भप’टन हुने महिलाहरुले यौ’न स’म्पर्कमा केहि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तर यौ’न स’म्पर्क गरेकै कारण ब्लि’डिङ हुने भन्नेहुँदैन।
यदि गर्भ’वती महिलालाई ग’र्भको कारणले गाह्रो भइरहेको छ, महिलालाई यौ’न इच्छा नै छैन तर तपाई त्यस्तो अवस्थामा पनि जबर’जस्ती यौ’न सम्प’र्क गर्नु भयो भने त्यो बला’त्कार हुन्छ, यदितपाई आफ्नो यौ’नजो’डि लाई साच्चै नै माया गर्नुहुन्छ, भाव’नात्मक बिश्वास छ भने त्यो बेलामा तपाईलाई यौ’न स’म्पर्क गर्नै मन लाग्दैन ।
त्यसैले तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा गर्भा’वस्थामा रहेकी महिलाले पनि यौ’न इच्छा देखाइनभने मात्र यौ’नस’म्पर्क गर्नुपर्दछ ।
प्रकाशित मिति १७ पुष २०७६, बिहीबार ०५:०८